Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta, Upamecano, Varane, Wijnaldum, Messi, Alaba, Anderson
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta, Upamecano, Varane, Wijnaldum, Messi, Alaba, Anderson
November 19, 2020 Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Liverpool iyo Manchester United ayaa helay dhiirigelin ku aadan saxiixa suurtagalka ah ee 22 jirka daafaca dhexe ee RB LeipzigDayot Upamecano iyadoo go’aanka mustaqbalkiisa la gaari doono bisha Janaayo. Bayern Munich ma awoodo inay la soo wareegto. (Bild via Mirror)
Goolhayaha reer Spain ee kooxda Chelsea Kepa Arrizabalaga, oo 26 jir ah ayaa amaah ku aadi doona isla markaana qaadan doona mushaar dhimis si uu dib ugu soo nooleeyo xirfadiisa ciyaareed. (sun)
Manchester United ayaa fursad u heysata inay lasoo saxiixato daafaca dambeedka dhexe ee reer France Raphael Varane, oo 27 jir ah kana yimaadda Real Madrid . (Manchester Evening News)
Real Madrid ayaa kula tartami doonta Barcelona saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Netherlands Georginio Wijnaldum, oo 30 jir ah, kana yimid Liverpool . (Corriere Dello Sport via Sport)
Weeraryahankii hore ee reer Cameroon iyo kooxda Barcelona Samuel Eto’o, oo 39 jir ah, ayaa wadahadalo kula jira kooxda heerka seddexaad ee dalka Spain Racing de Murcia si uu ugu soo laabto ciyaartiisa. Eto’o wuxuu howlgab noqday bishii Sebtember 2019. (Goal)
Weeraryahanka reer Argentina ee kooxda Barcelona Lionel Messi, oo 33 jir ah, ayaa feejignaan geliyey Manchester City ka hor inta uusan furmin suuqa kala iibsiga bisha Janaayo ka dib markii uu sheegay inuu “ka daalay had iyo jeer dhibaatada” Nou Camp. (Express)
Daafaca Bayern Munich iyo Austria David Alaba oo 28 jir ah ayaa diirada u saaran Real Madrid hadii daafaca dhexe ee reer Spain Sergio Ramos uu baxo xagaaga. (AS)
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda West Ham ee reer Brazil Felipe Anderson, oo 27 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu xilli hore ka soo laabto amaahda uu kula joogo Porto haddii kooxda reer Portugal ay awoodo inay dib ula soo saxiixato weeraryahanka reer Brazil Hulk, 34, oo ka socda Shanghai SIPG bisha January. (Record – in Portuguese)
Barcelona ayaa u muuqata mid aan u muuqan doonin inay lasoo saxiixato daafaca reer Spain Eric Garcia, oo 19 jir ah bisha Janaayo madaama Manchester City aysan dooneynin inay yareyso qiimeynta 20m euros (£ 17.8m). (Marca)
Arsenal ayaa ogolaatay inay la soo saxiixato daafaca xulka U21 ee Tunisia Omar Rekik oo 18 jir ah oo ka yimid Hertha Berlin bishii Janaayo – isla markaana amaah ku siiso kooxda Jarmalka.(Football London)
Sevilla iyo Hertha Berlin ayaa xiiseynaya saxiixa 27 jirka qadka dhexe ee kooxda Paris St-Germain Julian Draxler. (Calciomercato – in Italian)
Brighton , Newcastle iyo Sheffield United ayaa isha ku haya saxiixa xiddiga qadka dhexe ee kooxda Burnley iyo xulka England Jack Cork, 31. (Mirror)
Eintracht Frankfurt daafaca bidix ee reer Holland Jetro Willems, 26 jir ka ah, ayaa u furan inuu dib ugu laabto Newcastle United. (Newcastle Chronicle)
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa siiyay sideed rajo akadeemiyadeed fursad ay ku soo bandhigaan inta lagu jiro tababarka isbuucaan iyadoo ay jirto dhibaatada dhaawacyada kooxda. (Mirror)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Barcelona Xavi ayaa noqon kara tabare hadii uu ku soo laabto shaqada tababaranimo, ayuu yiri musharaxa madaxweynaha Barca Victor Font. (Reuters)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain iyo kooxda Monaco Cesc Fabregas, oo 33 jir ah, ayaa sheegay inuu “aad uga xun yahay” tababarihiisii ​​hore ee Barcelona Pep Guardiola. (CCMA via Goal)
Sideed iyo toban jirka khadka dhexe ee reer France Eduardo Camavinga ayaa sheegay inuu ku riyoonayo inuu ku biiro “koox weyn” laakiin ma uusan diideynin inuu qandaraaska u cusbooneysiiyo Rennes . (AS)
Maamulayaasha Premier League ayaa isugu yimid si ay dib ugu soo celiyaan ajandaha xeerka shanta badal lagu keenay. (Mirror)
Tababarihii hore ee kooxaha Liverpool, Chelsea iyo Newcastle Rafael Benitez ayaan ku raacsaneyn tababaraha Liverpool Jurgen Klopp iyo tababaraha Manchester City Pep Guardiola wuxuuna sheegay in Premier League uu ku saxnaa sharciga shanta bedel lagu soo galo. Express)